राजनीति | suryakhabar.com | Page 277
on: March 04, 2017 In: राजनीतिTags: No Comments
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका २३ आंगिक क्याम्पसमा बुधबार भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको थप परिणाम आएको छ । उपत्यकाका सात र बाहिरका १६ आंगिक क्याम्पस स्ववियु निर्वाचन भएक...	Read more
on: March 03, 2017 In: राजनीतिTags: मधेसबादी दल गुण्डा र लुटेरा हुन्- एमाले अध्यक्ष ओलीNo Comments
बिर्तामोड । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेसी मार्चाले गुण्डागर्दी गरेको आरोप लगाएका छन् । एमालेको मेचीमाहाकाली अभियानमा सकृय कार्यकर्तालाई सप्तरीमा कालोमोसो दलेको घटनालाई जोड्दै...	Read more
कमल थापाद्वारा मनोनीत राप्रपाका २७ पदाधिकारी कोको छन् त ? (नाम सहित)
on: March 03, 2017 In: राजनीतिTags: No Comments
काठमाण्डौ । राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकीकरणपछि भएको महाधिवेसनबाट अध्यक्ष बनेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले २७ जनालाई पदाधिकारीमा मनोनीत गरेका छन् । उपाध्यक्षमा त् ६ जना छन् भने माहामन्त्रीमा...	Read more
७ सय ३८ स्थानीय तह पुनःसरचनाको सिफारिस तयारी हुंदै
काठमाण्डौ । मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टीपछि स्थानीय बिकासमन्त्री हितराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठन भएको स्थानीय तह पुन:संरचना कार्यदलले ७ सय ३८ स्थानीय तहको सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।	Read more
काठमाण्डौ । स्थानीय निकायको निर्बाचनमा भाग नलिने बताईरहेको मधेसी मोर्चाले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेमा आफूहरु भाग लिनसक्ने संकेत गरेको छ । पुष्पकमल दाहाललाई राजनीनामा दिएर नयाँ सर...	Read more
on: March 03, 2017 In: राजनीतिTags: नेपाली सेनाको टोली बेइजिङ पुगेकै बेला भारतको यस्तो तयारी !No Comments
काठमाण्डौ । नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यासको तयारीका लागि नेपाली सेनाको एक टोली चीन गएको छ । सहायकरथी झंकर कठायतको नेतृत्वमा रहेको सेनाको एक टोली मंगलबार चीन गएक...	Read more
स्याङ्जा । ‘चुनाव हारेर म मरेकी होइन। आजसम्म मलाई जसले जस्तो व्यवहार गरे पनि कसैलाई नभनी सहेरै बसेकी थिएँ। बाँच्ने रहर थियो तर इज्जतै नरहेपछि बाँच्ने रहर मर्दो रहेछ। बाबा, आमा, दाइ, दिदी, भा...	Read more
काठमाण्डौ । मुलुकमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको चहलपहल सुरु भइसकेको छ । केही दिनअघि सरकारले आगामी २०७४ साल वैशाख ३१ गते चुनावको घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यतालिका समेत सार्वज...	Read more
काठमाण्डौ । बुधबार बहुसंख्यक मीडियाहरुमा नेपाली काँग्रेस पुट्यो भनेर समाचारहरु आए । आखिर के हो त शत्य तथ्य कुरा ? आम नेपालीहरुलाई जिज्ञासा होला, आखिर नेपाली काँग्रेस फुटेको हो त ?	Read more
on: March 02, 2017 In: राजनीति, सामाजिक सञ्जालTags: No Comments
काठमाण्डौ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १७ वटा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेको छ । मन्त्री गगन थापाको प्रत्यक्ष अगुवाई र निर्देशनमा ती निर्णयहरु भएका हुन् । मन्त्रालयले गरेका नीतिगत निर्णयहरुमा स्व...	Read more